Rattan Pendant Light Manufacturers na suppliers - China Rattan Pendant Light Factory
Ọchụchọ dị mkpa: Ọkụ Rattan Oriọna Rattan Ọkụ Rattan Floor Ọkụ Ngwo Ọkụ Pendant Bamboo Ahịrị Isiokwu Ngwo
Rattan, wicker na achara abụrụla akụkụ nke ime ụlọ n'ime ụlọ kemgbe oge ochie, ọkachasị na mba Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere ọdịnala obi ụtọ siri ike.
XINSANXING Lighting Factory bụ ọkachamara emeputa nke ọkụ rattan pendant. A na-eji oriọna rattan anyị na-emepụta bụ osisi eke na rattan ejiri aka mee, yana usoro ịkpa ọgbara ọhụrụ, nke dị oke mma na ọgbara ọhụrụ.
Rattan Pendant Lightaghọọla isi ihe na ụlọ ọgbara ọhụrụ n'ihi ọrụ ya na ike imepụta ikuku pụrụ iche. Ọkụ ndị a kpara akpa na-adịkarị ka nkata isi, nke na-abụghị naanị na-enwe textured, dị layered, kamakwa ọ dị mfe ma dịkwa ọcha. Ha aghọọla ihe na -elekwasị anya n'ụsọ osimiri Bali ma ọ bụ ihe ịchọ mma ime eke.
Ọ bụrụ na -amasị gị rattan mana enweghị mmasị na nhazi nkịtị, mgbe ahụ enwere ọtụtụ ụdị ọkụ rattan pendantmaka ịhọrọ: nwa, ọcha, acha anụnụ anụnụ, agba eke; oge a, retro, oversized, dịkọrọ ndụ, akụkụ anọ; okirikiri, square na ọmarịcha lace, wdg, ọdịdị na ọdịdị ya na -adịghị agafe agafe na -enye nnukwu ọkụ maka kichin gị, ụlọ iri nri, ime ụlọ, ime ụlọ, ọnụ ụzọ mbata ma ọ bụ oghere ọ bụla ọzọ dị n'èzí.
Anyị bụ ọkachamara soplaya nke ọkụ rattan pendant ma nwee ike ịnye ọrụ nhazi ahaziri iche na nha na agba dị iche iche. Nhazi na akwa nnọọ !!!